Mauricio Pochettino oo hoos u dhigay in Leicester ay ugu cadcadahay hanashada horyaalka | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Mauricio Pochettino oo hoos u dhigay in Leicester ay ugu cadcadahay hanashada horyaalka
Mauricio Pochettino oo hoos u dhigay in Leicester ay ugu cadcadahay hanashada horyaalka
Posted by: radio himilo April 22, 2016
Tababaraha Tottenham Hostpur Mauricio Pochettino ayaa carabka ku dhuftay in la’aanta Jamie vardy ay ka dhigi doonto kooxda Leicester mid ka awood yar sida ay aheyd.
Leicester City oo hogaanka horyaalka heysa ayaa weyn doonta gool dhaliye Vardy ugu yaraan hal kulan kaddib kaarkii casaa oo toddobaadkan uu qaatay kulankii ay barbaraha min labada gool ah la dhaafi waayeen West Ham.
Vardy ayaa garoonka kaga baxay isagoo caro badan ay wehliso, kaddib markii garsoore Jonathan Moss uu xiddigan siiyay kaarkiisii labaad oo huruud ah daqiiqaddii 56aad, xilli Vardy uu si cad isku tuuray isagoo kubad kula dagaalamayay Angelo Ogbonna.
“Waxaan u maleynayaa inay saameyn xoogan ku reebi doonto Leicester maqnaanshiyaha Vardy sababtoo ah waa mid kamid ah xiddigaha Premier Leeague ugu wanaagsan.” Pochettino ayaa sidaa la wadaagay Telegraph.
Previous: James Rodriguez oo weli muhiim u ah kooxda macallin Zidane
Next: Benitez oo rajeynaya inuu guul kala soo laabto marka uu ku laabto Anfield